Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihii Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfur Africa oo ku soo dhamaaday guul
Shirweynihii Jaaliyada Ogadeniya ee Koonfur Africa oo ku soo dhamaaday guul
Waxaa sinabad galya ah ku soo gabagaboobay Shirwaynihii Jaaliyada Ogadenia ee Koonfur Africa oo 4 maal mood ka socday xarunta Jaaliyada JOKA ee Port Elizabeth.
Maanta oo ahayd maalintii ugu danbaysay Shirwaynaha ayay Xubnuhu ku doorteen gudi cusub oo wadi doonta hawlaha Jaaliyada Sanadkan 2013.
Wufuud fara badan oo ka kala socday gobolo aad u kala durugsan ayaa isugu geeyey dadaalkoodii maanta in xubnaha la dooranayo noqdaan kuwo lagu xusho karti, khibrad iyo aqoon. Inkasta oo tar tarnka dadka wax dooranaya ku kala xulanayeen dadka ay kala taageersanyihiin hadana waxay ahayd arin aad farxad u leh in habka doorashadu noqotay mid cid kastaaba ku qanacdo ruuxa la doortay.
Sidoo kale waxaa maanta la ansixiyay xeer hoosaadka Jaaliyada Ogadenia ee koonfur Africa oo 2dii Sanaba mar dib loo eego.
Xubnaha oo furitaankii Shirka khudbo ka dhagaystay gudoomiye hii hore ayaa sidookale dhagaystay gudoomiyaha cusub maalintii 4aad xidhitaankii Shirka. Waxaa hadaladiisa ka mid ahaa Gudoonka Cusub ee loo doortay Jaaliyada JOKA
“Waxaan ku faraxsanahay inaan dadkayga ushaqeeyo. Waxaanse ka Calool xumahay in aan xilka dib ugu soo noqdo 3Sano kadib Ogadenia oon wali xoroobin” , waxaykamid ahayd hadalkii koobnaa ee gudoomiyaha cusub ee ladoortay. Waxaa kale uu ifiyay umuuro dhawr ah oo uu ku hamiyay inuu hirgaliyo sanadkan hadii Eebe idmo isagoo ugu horaysiiyay ahmiyad wayn oo lasiiyo Xubnaha Jaaliyada.
Waxaa iyana hadalo kooban ka jeediyay goobta Xubnaha kale ee gudida Cusub. Gudida la doortay waxaa ka muuqday nashaad iyo caabooni waxayna ballan qaadeen in ay horumar wayn u horseedi doonaan Jaaliyadda.
Waxaa Sidoo kale maanta ladoortay gudoomiyaha Ururka haweenka Ogadenia ee Koonfur Afrika. Waxaan meeja ka maqnayn Ciyaarihii Hidaha & Dhaqanka Somalida Ogadeniya oo goobta laga soo jeediyay & waliba Suugaan Halgameedkii Ogadeniya.
Fillo Videos ama Films aad ka daawan dontaan IleysTV.